Uchwepheshe we-Semalt NgokuHlangela ukuhlaselwa - Kanjani & Kungani?
Njengoba abantu abaningi bephendukela ekusebenziseni i-inthanethi, usongo oluvamile luye lwavela - ukukhwabanisa.Ekuqaleni, leli gama libhekiswe kwinqubo yokufunda izinhlelo zekhompyutha kanye nezilimi zokuhlela. Ngokuhamba kwesikhathi, leli gama laqala ukulimazaokusho okubonisa amandla okudlula inethiwekhi yekhompyutha noma ukuphepha kwesistimu.
Igor Gamanenko, omunye wabachwepheshe abahola phambili i-Semalt ,ubheka ngokujulile izizathu nezinhloso zokuhlaselwa.
Ngokuvamile, abahlukumezi bewebhusayithi bahlasele izinhlobo ezingu-5 zokuhlaselwa kwamanethiwekhi namakhompyutha. Lokhu kufaka:
1. Ukuhlaselwa kweDenal of Service (DDoS) ukuhlaselwa
Lezi zenzelwe ukunciphisa izinhlelo ezingenazo izici zokuphepha ezifanele futhigxila emachwebeni avulekile kanye nokuxhumeka kunethiwekhi. Ngokuvamile, ukuhlaselwa kwe-DDoS kuhlose ukuphazamisa uhlelo ngokuthumela izicelo eziningiokubangela ukuthi inethiwekhi noma isistimu iqhume noma ivaliwe. Naphezu kwalokhu, amasistimu amaningi amelana nokuhlaselwa futhi alulame kalula.
2. I-Trojan Horse
Lona isofthiwe efakwe njenge-freeware noma i-shareware ebalulekile. Isofthiwe efihliweivame ukufakwa ngokucophelela ngumphathi wewebhu ongazi ukuthi isofthiwe iqukethe ngempela.
Ngokuvamile, isofthiwe iqukethe izici ezivula umnyango wangemuva wesistimu yakho ukuvumelaukufinyelela okungagunyaziwe ohlelweni lwakho noma nini lapho usebenzisa isofthiwe. Ngaphandle kwalokho, isofthiwe ine-trigger ehlelwe yizici ezithileizenzakalo noma ngosuku. Uma kususwe, isofthiwe ivala phansi uhlelo lwakho noma inethiwekhi. I-Spyware iyisofthiwe engalimazi kakhuluejwayele ukusetshenziselwa ukuqoqa idatha okuthengiswa kamuva ezinkampanini zokumaketha.
Lona ukuhlangana kwe-webmasters okuyisongo kunazo zonke. Ngezinga eliyisisekelo kunazo zonke, iUhlelo olubi olukwazi ukuziphindaphinda. Ukugxila okuyinhloko kwegciwane ukuhlasela nokubhubhisa uhlelo lomphathi..OkuvamileIzibonelo zezinhlelo ezinonya zibandakanya i-Frodo, i-Cascade ne-Tequila.
Lezi zindawo ezisemthunzini ezixhaphaza ukuphepha kwamanye ubuchwepheshe bewebhu ngaphakathioda ukuze wenze isiphequluli sakho sihlanganyele emisebenzini engagunyaziwe.
Lena i-malware yokukopisha okuzikopishayo efaka izinsiza eziyigugu kwisistimu yakho kuze kube yilaphouhola ngokweqile futhi uyeka ukusebenza. Izinambuzane zenzelwe izinhlobo ezithile zamakhompyutha ezenza zingasebenzi ngokumelene nezinye izinhlelo.
Ngakho-ke, kungani abahlukumezi bewebhu behlanganyela kule mibi?
1. Ukufinyelela nokusebenzisa uhlelo lwakho njenge-Inthanethi Yokudlulisa Ingxoxo ngemisebenzi engekho emthethweni-kusukelaAbaduni bavame ukwenza imisebenzi engekho emthethweni, badinga ukufihla imisebenzi yabo. Ukuze wenze lokhu, bathatha amaseva ukugcina okuqukethwe okungavumelekilenoma ngezinjongo zokuxhumana.
2. Ukweba ulwazi.
3. Ukuzijabulisa nokuzijabulisa.
4. Ukuze abasebenzi be-savvy tech baphindiselelwe baxoshwe kwinkampani noma ibhizinisi elicasulayo, abaphikisana nabokungenzeka kakhulu ukuphazamisa uhlelo lwakho ekuhlaselweni okuphindisela.
5. Ukukhangisa-abanye abaduni bayathanda ukusabalalisa futhi bangenza noma yini ukuze baqaphele.
6. Ukuze uzame noma uhlole uhlelo-kwezinye izimo, ochwepheshe be-ICT bacela i-webmastersukuhlola amasistimu abo ukuze abone ubuthakathaka bawo emzamweni wokusiza ekuthuthukiseni ukuphepha.
7. Ngenxa yesifo esaziwa ngokuthi i-Asperger Syndrome. Abantu abahlupheka ngalesi simobangabandlululo kepha banelungelo lokugxila enkingeni isikhathi eside kakhulu.
8. Ngaphandle kwelukuluku..
9. Ukuze uhlole ukuthi ozakwabo, abashade nabo, abathintekayo bebhizinisi noma amalungu omndeni akhona.
10. Ukuze uthole amalungelo okuziqhenya.
11. Njengenselelo yengqondo.
12. Ukuze uthole inzuzo yezezimali-nakuba abaningi abaduni be-website bengenzi imali, ezinye ze-cyberizigebengu ziphila ngokufaka inkohliso yamakhadi esikweletu.
Abantu abasengozini yokuhlaselwa okunonya
izinkampani zokuphepha kwe-intanethi-lezi zinkampani zinokuphepha okungcono kakhulu okwenzayoumgomo okhangayo wabaduni.
Amafemu asephrofayli aphakeme-amawebhusayithi wezombangazwe kanye nezinkampani zomhlaba wonkengokuvamile ihlosi elingenakuvinjelwa kwabaduni abafuna ukuthola amalungelo okuziqhenya.
Noma ubani onamasayithi wesayithi-noma yi-e-commerce ahloswe kakhulu yizigebengu ze-cyber,Abaduni abakucabangi ukuvala noma yikuphi uhlelo olusengozini.
Indlela ukuphepha kwewebhusayithi okwehliswa ngayo
Ukuthungwa kwamawebhusayithi kungathandeka kakhulu. Kusobala ukuthi amabhizinisi athintekilebabenomphumela wokwehliswa, kodwa babengacabangi ukuthi ukutheleleka kwakuzofinyelela kumawebhusayithi abo. Ukufinyelela ukulawula ibhizinisi lakho kushookuningi. Ukufinyelela ukulawula, i-hacker yenza uchungechunge lwemizamo yegama lakho lomsebenzisi nephasiwedi. Izimpawu zakho zingadluliselwakusuka komunye umkhawulo kuya kwesinye ngokusebenzisa ukucabangela okufanele okwenziwa yi-hacker.
Enye indlela yokukhwabanisa kungenxa yokukhubazeka kwesofthiwe. Akushokufanele ube isofthiwe yakho efakiwe, kodwa futhi iziphequluli zakho. I-hacker ingathola ukufinyelela kuzifakazo zakho ngokulawula isiphequluli sakho.
Njengomnikazi wewebhusayithi, udinga ukusebenza ngendlela yokuvikela iwebhusayithi yakhobaqhekekile. Ukugcizelela ukuthi izivakashi zifinyelela kanjani iwebhusayithi yakho yebhizinisi yisici esisodwa esingakusiza ukuvikela isayithi lakho. Qinisekisa ukuthi chaiziqinisekiso zikhonjiswa. Yenza indawo yakho yomsebenzisi-friendly ngokubheka ukuphepha kwewebhusayithi yakho.